कांग्रेस र एमालेका दुई उम्मेदवारको गाडी जलाइयो - Karobar National Economic Daily
कांग्रेस र एमालेका दुई उम्मेदवारको गाडी जलाइयो
query_builderMay 6, 2017 11:33 AM supervisor_accountरामहरि न्यौपाने visibility2234
आगजनी गरिएको एमाले उम्मेदवारको गाडी
नुवाकोट: नेपाली का‌ंग्रेसबा शिवपुरी गाँउपालिकाको अध्यक्षका उम्मेदवार रामकृष्ण थापाको बा.११ च ३४९९ नं. को स्कर्पियो गाडीमा तोडफोड र आगजनी गरिएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोटका प्रहरी निरीक्षक जितेन्द्र बस्नेतका अनुसार चुनावी प्रचारबाट फर्केर राति ११ बजे पञ्चकन्या गाँउपािलकाको वडा नं. ५ शिवालयमा रोकिराखेको अवस्थामा अज्ञात समूहले गाडीमा क्षति पुर्‍याएका हुन् । घटनामा संलग्नको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
तोडफोड र आगजनीबाट गाडीको इञ्जिन, सिट, झ्याल लगायतमा पूर्ण क्षति भएको छ । गाडीमा क्षति पुगेको जानकारी आज बिहान मात्र देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेको काँग्रेसबाट गाउपालिकाको अध्यक्ष पदका उम्मेदवार थापाले बताए ।
हिजो मात्र शिवपुरी गाँउपालिकाको वडा नं.७ मा नेकपा एमालेबाट वडा अध्यक्ष पदका उम्मेदवार राजाराम गुनीको प्रचार अभियानमा काग्रेस कार्यकर्तासँग झडप भएको थियो । झडपमा घाइते भएका एमाले समर्थित चन्द्रबहादुर तामाङ घाइते भएकाले उपचारको लागी काठमाडौ लगिएको छ ।
धादिङको थाँक्रे गाउँपालिकामा पनि आज बिहान चुनाव प्रचारका लागि प्रयोग गरिएको एउटा गाडीमा आगजनी भएको छ ।
बिहान १:३० बजे गाउँपालिकाको सङ्ग्रामटारमा बा ९ च ८९२९ नंको हाइलक्स जिपमा आगजनी भएको हो । नेकपा(एमाले)का तर्फबाट थाँक्रे–२ का वडाध्यक्षका उम्मेदवार राजकुमार पौडेलले आफ्नो चुनावी प्रचार सकेर घरको परिसरभित्र राखेको अवस्थामा गाडी जलाइएको हो ।
मध्य रातमा आएका तीनजनाको अज्ञात समूहले गाडीमा तोडफोड गरी पेट्रोल छर्केर आगो लगाई भागेको बताइएको छ । गाडीमा आगलागी भएलगत्तै प्रहरीले आगलागीमा संलग्नको खोजीलाई तीव्र बनाएको छ ।
स्थानीय निर्वाचन नुवाकोट